Haweeney waxaa ku dhacay cudur aan la aqoonin sanadihii 10, shaqaaluhu waxay ogaadeen in la sumeeyey - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Haweeney waxaa ku dhacay cudur aan la aqoonin sanadihii 10, shaqaalaha waxay ogaadeen inay sumoobeen
Daawada casriga ah ayaa laga yaabaa inay aad u horumarsan tahay, laakiin taa macnaheedu maahan inay dhakhaatiirtu jawaabo u leeyihiin wax walba. Bukaano badan ayaa si qalad ah loo baadi goobayaa qaarna waxay kadhigtaan aqoonyahanada astaamaha qarsoon.
Dadku waxay qaadan karaan bilooyin iyo xitaa sanado iyagoo aan ogayn waxa ku khaldan. Kathi Wilson, 41, oo ka timid Indiana, ayaa ka mid ahayd.
Intii lagu jiray sanadihii dheeraa ee 10, Kathi Wilson waxaa ku dhacay cudur sababay inay dareento daal aad u daran. Gabadha yareyd ee 41 sano si sax ah uma socon karin, waa inay xitaa isticmaashaa bakoorad.
Calaamadahaheeda, oo ay kujiraan murqaha xanuun iyo raaxo daro, ayaa sii xumaanayay waqtigaas mana jirin cid fikrad ka haysata waxa qaldan iyada.
Dhakhtarka Wilson wuu wareersanaa sababta oo ah wuu garan waayey sababta uu bukaankiisu u dareemayo sidan oo kale. Kathi waxay isku dayday dawooyin badan, laakiin waxba kama aysan caawin. Waxay diyaar u ahayd inay ka tanaasusho ilaa koox ka mid ah kuwa guryaha dhistaa ay badbaadiyaan nolosheeda.
Shaqaalaha, oo loo qoondeeyay inay cusboonaysiiyaan qolka maydka haweeneyda, waxay ogaadeen in kuleylka iyo kuleyliyaha biyaha gurigeeda aan si sax ah loo rakibin. Tani waxay dhalisay wax yar oo daadad ah oo kaarboon moono oksaydh ah.
Waxaan sii wadaa fidinta erayga. Waligey ma doonayo inaan arko qof ku nool waxa qoyskeyga iyo aniga aan ku nooleyn. Astaamahaygu kuma eka oo keliya kuwa hargabka. Waxaan la dhibtooday gariir, gariir, calool xanuun, lugo lugo, isuduwid iyo isu dheellitir la'aan, xusuustaydu way fashilantay, marwalbana waxaan dareemay sidii ceeryaamo Jahwareer, wareer, madax fudud, iyo liiskan ayaa socon kara maalmo. Kaliya ma ahayn daadinta kaarboon monoksaydh, laakiin waxay kaloo ahayd daadinta gaaska dabiiciga ah. La kulanka labadoodaba waxay sababi karaan ca ... Arag in dheeraad ah
Gaaska cad, ee aan wanaagsaneyn, ee sumcad ulahahay inuu dilaa aamusnaan, wuxuu si tartiib ah u sumeeyay Wilson. Kadib markii shaqaaluhu xalliyeen dhibaatada, Kathi waxay ku soo laabatay nolol caadi ah oo hadda way faraxsan tahay, caafimaad qabtaa iyo tamar buuxda.
Sida looga ilaaliyo qoyskaaga sunta kaarboon moono-oksaydh
Hubso inaad nidaamka kuleylka gurigaaga si joogto ah u hubiso xirfadle. Ha u isticmaalin burushka dhuxusha, foornada ama foornada gaaska kuleylka.
La soco astaamaha sunta kaarboon monoksaydhka, oo ay ka mid yihiin dawakh, lallabbo, madax xanuun, daal, lulmo, iyo matag. Haddii astaamahani dhacaan, bixi sida ugu dhaqsaha badan uguna wac qolka xaaladaha degdegga ah.
Naqshadeeyayaasha caanka ah ee caanka ah ayaa qoro waxyaabo ka dhiga haweenka da'da weyn inay u ekaadaan